Goorta ay dhacayso ciyaarta ay dhexdhexaadinayaan garsoorayaasha Somalia & halka laga daawan karo? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Goorta ay dhacayso ciyaarta ay dhexdhexaadinayaan garsoorayaasha Somalia & halka laga daawan...
Goorta ay dhacayso ciyaarta ay dhexdhexaadinayaan garsoorayaasha Somalia & halka laga daawan karo?
(Lomé) 05 Sebt 2021 – Garsoorayaal Soomaaliyeed ayaa dhexdhexaadin doona kulan ka tirsan isreereebka Koobka Adduunka 2022 lagu qabanayo Qadar, kaasoo u dhexeeya xulalka Togo iyo Namibia.
Ciyaartan oo ka dhici doonta gegada Stade de Kégué ee caasimadda Togo ee Lomé, ayaa waxaa qabanaya garsoore Cabdulqaadir Cartan, halka ay calamada u kala sidaan Xamsa Cabdi oo ah calanhayaha 1-aad iyo Nuur Cabdi oo ah midka 2-aad.
Waxaa xeer ilaaliye ciyaarta ka noqonaya garsoore Xasan Maxamed, iyadoo ay afarta garsooreba u dhasheen dalka Somalia, iyagoo uu fadhigoodu yahay Muqdisho, Somalia.
Waxaad ciyaartan oo soo geleysa 18:00 aminta Yurubta dhexe aad ka daawan kartaa Super Sport iyo hilinno kale.
Previous articleDEG DEG: RW Rooble oo markii ugu horreeysey kulan la qaatay qoyska Ikraan Tahliil + Sawirro
Next article“Xabado culus ayaa ka dhacaya Madaxtooyada!” – Shaqaaqo siyaasadeed oo ka taagan dal xiriir la lahaa Somaliland